Panguva ino, Microsoft Edge ichauya kuIOS gore risati rapera | IPhone nhau
Panguva ino, Microsoft Edge ichauya kuIOS gore risati rapera
Gore rakapera, panguva imwe chete yegore, takadzokorora chinhu chenhau umo zvakataurwa kuti Microsoft yakaronga kuvhura nharembozha yebrowser yayo Yakasarudzika yeWindows 10: Microsoft Edge. Asi sezvo isu takakwanisa kuongorora, pakupedzisira haina kuona mwenje.
Zvakare runyerekupe rwakabuda marwunotaurwa zvakare kuti Microsoft, ino nguva kana, inotarisira kuvhura yavo desktop desktop yemafoni nhare. Edge inowanikwa chete kune desktop desktop ye Windows 10, saka kufamba uku kwaizoibvumira kuti iwedzere mugove wayo wemusika, mugove unoramba uchiderera.
Kubva kuvhurwa kwayo, neruoko rwe Windows 10, Edge anga asiri iye anodikanwa nevashandisi kunyanya nekuda kwekushaikwa kwezvinhu zvakaita sekuwedzera kana kugona kuenzanisa mabhukumaki pasina kuenda kumberi. Vazhinji vashandisi vajairira kuve nedata ravo rekubhurawuza pane yavo nhare mbozha, basa rinongowanikwa muSafari, Chrome neFirefox mune desktop yavo uye nharembozha. Mukupedzisira, zvinoita sekunge Microsoft yaona kuti nzira chete yekukura ndeyekuwedzera huwandu hwezvigadzirwa kwainowanikwa, senge Chrome, bhurawuza iro rinowanikwa kune ese mapuratifomu pamusika.
Mushure mekundikana kweWindows 10 Nhare, zvinoita sekunge Microsoft iwe haudi kuve wakazara zvachose pafoni, saka kuvhurwa kweMicrosoft Edge kwemidziyo yemafoni kunogona kuva shanduko yeMicrosoft kudzamara yatanga iyo runyerekupe rweSurface Runhare, kana zvikazoitika uye kupera kweMicrosoft nharembozha ecosystem haina kusimbiswa zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Panguva ino, Microsoft Edge ichauya kuIOS gore risati rapera
Antonio Morales muchengeti wemufananidzo akadaro
Ndakaedza bhurawuza iri paWindows 10 asi haina kundigutsa zvizere.
Pindura kuna Antonio Morales
Vashandi veApple vari kutoyedza mukati Apple Pay Cash
iOS 11 inowanikwa pane 38,5% yezvigadzirwa mavhiki maviri mushure mekutanga kwayo